Yakanakisa selfie tsvimbo ye iPhone India - ALinks
Kutsvaga imwe yeakanakisa selfie matanda eiyo iPhone muIndia? Zvakanaka, haufanire kutarisa kumberi. Isu takaburitsa runyorwa rweyakanakisa selfie tsvimbo yeiyo iPhone India. Kana iwe usiri kuda kuisa panjodzi yekukanda chidimbu chako chehunyanzvi mugungwa, iwe uchafanirwa kuisa mari mudanda.
Matanda eSelfie anotengeswa kunzvimbo dzinoyeuchidzwa nevashanyi anowanzo kuve asina kujeka, anodedera, uye asina kuvimbika. Asi, izvi hazviratidze kunze mukana wekushandisa izvi zvakakosha zvitsigiro. Hapana imwe nzira irinani yekurangarira zororo rako pane kamera. Kunyanya kana iwe uchifamba wega.
Kwete kungochengeta foni yako yakatwasuka, asi iyo selfie inonamira pamusika zvakare inopa akasiyana maficha. Vamwe vane kugona kweBluetooth kana vanogona kutendeuka kuita katatu. Iyi ficha inobatsira kana iwe uchida kupfura isina maoko. Multi-inoshanda tsigiro ndiyo nzira yekuenda, kunyanya nekuti haina kudhura. Kutenga tsvimbo online kazhinji kunodhura pane kutenga vhezheni yakapusa mumusungo wevashanyi.
Yakanakisa selfie tsvimbo ye iPhone India musi Amazon
Hoteon Mobilife Makaralı Inokwanisika Selfie Stick Buy @ ₹ 539.00
Sunungura maoko ako, nakidzwa nehupenyu hwako neMobile Selfie Stick Tripod!
Yakavakwa-muTatu Iyi mbiri-mu-imwe selfie stick tripod inouya neyakavakirwa-mukati isina waya kure, ichiita kuti ive yakanaka kune wega kana pati yepamoyo.
Compact maitiro anotendera iwe kutora iyi selfie tsvimbo newe kwese kwaunoenda. Kunyangwe painotakurwa muhomwe, zviri nyore.
Adjustable Holder: Inokodzera kune mazhinji mafoni eApple neApple, iine kuwanda kukuru kwe3.5 inches.
Zviri nyore kumisikidza uye kushandisa:
Nhanho 1 Chinja bhatani rekamera pane remote control kuti uvhure shutter. SelfieCom inopinda pairing mode uye iyo chiratidzo iyo LED inopenya nekukurumidza.
Nhanho 2: Chinja pane chinhu pane yako foni uye tsvaga zvishandiso padyo.
pTron Glam Plus Makaralı Inokwanisika Selfie Stick Buy @ ₹ 499.00
Iyo pTron Glam Plus 2-in-1 selfie stick tripod ine wireless remote shutter (max. 10m / 33ft) inobatsira iwe kutora selfies kana kushandisa remote control kutora mifananidzo yemapoka yezviitiko zvakaita sekupedza kudzidza, michato, uye kufamba. Inogona kushandiswa seyakajairwa selfie tsvimbo kana seyakareruka katatu. Lightweight uye inotakurika: Iyo pTron Glam Plus isina waya selfie tsvimbo ine katatu inorema chete 132g, ine yakapetwa urefu hwe20cm, uye inogona kutambanudzwa kusvika ku73cm. Nekuda kwepfuti, shandisa ipfupi renji, uye kune yakafara mapfuti, shandisa yakareba yakareba. Inogona kutsiva lithiamu yesimbi bhatiri yakavakirwa-mukati: Iyo selfie tsvimbo yetripodhi kure ine inogona kutsiva lithiamu yesimbi bhatiri yakavakirwa-mukati.
Mobilife Makaralı Inokwidziridzwa Selfie Stick neWireless Remote Buy @ ₹ 999.00
Selfie Stick Tripod ine Rearview Mirror uye Remote yeBluetooth Zviri nyore kutora selfie-kutora mafoto kana mapikicha emapoka neiyi girazi selfie tsvimbo ine yakavakirwa-mukati isina waya kure kutonga, iyo yakanakira mapoka, kufamba, uye kufamba musango. Paunenge uchishandisa kamera yekumashure, girazi rekutarisa kumashure rinogona kupa mufananidzo wakakwana. Zvakare, iyo yakavakirwa-mukati yekuzadza mwenje ichakubatsira iwe mukutora yakanaka yakanaka selfie. Mavhidhiyo paTik Tok uye Vlogs
Akanakisa Juice Mugadziri anowanikwa muIndia
Ndeipi ndiyo yakanakisa kumeso kumeso kuIndia? Tarisa Pano!
Yakanakisa mafuta emahara anodzikisira mwaka wezhizha muIndia! Tarisa Pano!
Nhare dzakanakisa muuk
Yakanakisa yemapuranga kofi tafura India